Raw URB597 (546141-08-6) HPLC≥98% | AASraw họrọ inhibitor
/ ngwaahịa / Ọla abụba / URB597
Rating: Category: Ọla abụba Tags: zụta URB597, URB597, URB597 maka ire ere, Ndị ọrụ ahịa URB597
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke URB597 (546141-08-6), n'okpuru ụkpụrụ CGMP na usoro nchịkọta mma.
URB597, nke a makwaara dị ka KDS-4103, bụ onye nwere ike ịmepụta ma ọ bụ nke na-ahọpụta nke fatty-acid amide hydrolase (FAAH), enzyme nke na-eme ka hydrolysis intracellular nke anocamide endocannabinoid, nke nwere ihe gbasara 50% IC50 nke 4.6 nM na 0.5 nM na rat ụbụrụ membranes na ụmụ mmadụ imeju microsomes karị. URB597 na-egosipụta nchegbu nchegbu, antidepressant, antinociceptive na analgesic utịp ke vivo na-enweghị na-ekesa mgbaàmà ndị ọzọ metụtara cannabinoid-dị ka ogige.
I.URB597 isi ihe:
Ịdị ọcha: ≥99% (HPLC)
Ụdị Mkpụrụkpụ: C20H22N2O3
Ọbara arọ: 338.4
Synonyms: N-Cyclohexylcarbamic acid 3 '- (aminocarbonyl) [1,1'-biphenyl] -3-yl ester; 3'-CarbaMoyl- [1,1'-biphenyl] -3-yl cyclohexylcarbaMate; 3- (3-carbaMoylphenyl) phenyl N-cyclohexylcarbaMate CarbaMic acid, N-cyclohexyl-, 3 '- (aMinocarbonyl) [1,1'-biphenyl] -3-yl ester; XDSNNXX N - Cyclohexylcarbamic acid 4103' - (aminocarbonyl) [3'-biphenyl] -1,1-yl ester N-Cyclohexylcarbamic acid 3 '- (aminocarbonyl) [3'-biphenyl] -1,1-yl ester URB 3 KDS 597; URB 4103,> = 597%; APD98 (URB597)
Alfa: D + 5 Celsius (c = 0.437 na chloroform)
Solubility DMSO: soluble2mg / mL, doro anya (warmed)
agba: White siri ike
II. URB597 ojiji na okirikiri:
2.How bụ ọrụ maka URB597?
Rationale: Otu nchegbu na-emetụta nchegbu nke iji 1 (CB1) na-anabata ihe na-eme ka a na-aṅụ cannabinoid bụ na ogige ndị a na-eme ka mmanya na-aba n'anya na ịṅụ ọgwụ ọjọọ. Dịka ụzọ ọzọ, a ga-eme ka ọrụ CB1-receptor na-arụ ọrụ site na-arịwanye elu na-eto eto na iji hydrolase fatty acid amide hydrolase (FAAH) inhibitors. Ebumnuche: Site n'iji onye na-emepụta onye ọrụ FAAH URB597, ma anyị nyochaa ma mmalite nke ụda nke cannabinoid na-eme ka ịṅụbiga ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya ókè, dị ka ihe na-eme ma ọ bụrụ na CB1 bụ onye na-agu agonists. Ihe onwunwe na ụzọ: a nwalere URB597 na njide onwe onye na-aṅụ mmanya na mmanya na-aṅụ mmanya na-aṅụ mmanya na-aṅụ mmanya na-egbu egbu (msP). N'ime ụmụ irighiri mmiri, nsogbu URB597 maka mmanya na-aba n'anya-na-akpata nchekasị na nchekasị-, yohimbine- na ịghaghachi ịmaliteghachi ịṅụ mmanya na-achọ. Iji tụnyere ya, a nwalere mmetụta nke onye na-anabata onye na-anabata ihe na CB1 rimonabant na ethanol onwe-administration. Nsonaazụ: N'okpuru ọnọdụ nnwale anyị, nchịkwa intraperitoneal (IP) nke URB597 (0.0, 0.3 na 1.0 mg / kg) ma ọ bụ ịba ụba na-aṅụ mmanya na-egbu egbu na msP rats ma ọ bụ na-edozi 1 ruru ala na njikwa onwe ya na Wistars. N'ime ule nbanyeghachi, ụlọ ọrụ ahụ enweghi mmetụta na ntụgharị, nchekasị ụbụrụ - na nlọghachi azụ nke yohimbine. N'aka nke ọzọ, URB597 kpochapụrụ nzaghachi nchegbu nke a na-atụle n'oge ịghapụ mgbe nnukwu nchịkọta IP nke mmanya (3.0 g / kg). Rimonabant (0.0, 0.3, 1.0 na 3.0 mg / kg) belatatara ethanol njikwa onwe onye. Mkpebi: Ngosipụta na-egosi na nbalite nke usoro nandocanabinoid nke anandamide site na ntinye aka nke FAAH adịghị eme ka ịṅụbiga ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya ókè ma belata nchekasị nke ịṅụ mmanya. Anyị nwere ike ịkọwa na ọgwụ ndị dabere na iji endocannabinoid system modulators dịka URB597 nwere ike inye uru dị mma ma e jiri ya tụnyere ọgwụ na ndị na-akwado ọrụ CB1.
3.I nwere mmetụta URB597?
A na - enyocha mmetụta nke URB 597 na naanị ya na anandamide na otu ìgwè enwe (n = 4) nke kpara Δ9-THC anya (0.1 mg · kg-1 iv) site n'ụgbọala, na nchịkọta ọzọ (n = 5) Δ9-THC na-adịghị ala ala (1 mg · kg-112 h-1 sc) nke na-egosi ọdịiche dị na onye na-agba rifonist rnonabant cannabinoid (1 mg · kg-1 iv).
URB 597 kwalitere mmetụta omume nke anandamide ma ọ bụghị ndị ọzọ agonists CB1. Otú ọ dị, URB 597 emeghị ka mmelite nke Δ9-THC gbanwee nke ọma. Otu n'ime ha, data ndị a na-egosi na ụbụrụ dị na ụbụrụ ụbụrụ n'emeghị ngwa na-egosipụta mmetụta omume nke na-eme ka ọ bụrụ ihe na-adịghị mma.
Onye nwere ike ịhọrọ fatty acid amide hydrohibit (FAAH) (ihe ndị IC50 bụ 3 na 5 nM n'ime imeju mmadụ na oke ụbụrụ,). Egosighi ọrụ mmechi ọ bụla dị iche iche megide ọtụtụ ndị nabatara, channelions ion na enzymes, gụnyere ụmụ mmadụ na-enweta cannabinoid na oke monoacylglycerol lipase. Na-egosiputa ọrụ antiallodynic na antihyperalgesic na ihe mgbu mgbu. In vitro, KDS-4103 na-eme ka FAAH na-eme ihe dị iche iche (IC (50)) nke 5 nM na ụbụrụ ụbụrụ ụbụrụ na 3 nM n'ime ụmụ microsomes. Na vivo, KDS-4103 na-egbochi ụbụrụ ụbụrụ FAAH mgbe ọ na-ejikọta intraperitoneal (ip) site na ntinye ọgwụ mgbochi (ID (50)) nke 0.15 mg / kg. Ụlọ ọrụ ahụ anaghị enwe mmetụta dị mfe na ntanetị ndị ọzọ nwere ike ịnabinoid, gụnyere ndị na-anabata cannabinoid na njem ụgbọ mmiri, ma ọ bụ ndị na-anabata ya, ọwa mmiri, ndị transporters na enzymes. Site na nchịkọta nchịkwa na oke na ụmụ oke KDS-4103 na-eme ka mmetụta dị ịrịba ama, mmetụta nchegbu, nsogbu antidepressant na mmetụta analgesic, nke a na-egbochi site na ọgwụgwọ na ndị na-anabata onye na-anabata CB1. N'ụzọ dị iche, na doses nke na-egbochi ọrụ FAAH ma na-ebuli ụbụrụ nke ụbụrụ, KDS-4103 anaghị eme ka mmetụta ndị na-eme ka ahụ nwee ikebibinoid (dịka, catalepsy, hypothermia, hyperphagia), anaghị eme ka ebe dị mma, mmetụta dị iche iche nke ingredient active nke cannabis, Delta9-tetrahydrocannabinol (Delta9-THC). Nchọpụta ndị a na-egosi na KDS-4103 na-eme site na ịmepụta ụbụrụ ụbụrụ na mpaghara nke mpaghara CB (1), nke nwere ike na-ejikarị na-achịkwa mmetụta na mgbu. KDS-4103 nwere ọnụ ọnụ na oke na cynomolgus enwe. Usoro ọmụmụ ọmụmụ na-adịghị ala ala (1,500 mg / kg, kwa os) n'ime ụdị abụọ a egosighi na ogbugbu nke usoro. N'otu aka ahụ, ọ bụghị ọgwụ ọjọọ na-egosi na nje cytotoxicity na-akpata nje na n'ime ule Ames. Ọzọkwa, ọ dịghị ụkọ ọhụụ a hụrụ na oke na rotarod ule mgbe nnukwu ọgwụgwọ na-agwọ ọrịa na KDS-4103 na doses ruo 5 mg / kg ma ọ bụ na batrị ahụ na-arụ ọrụ mgbe ọ gwọchara ọgwụ ruo 1,500 mg / kg. Nsonaazụ ya na-egosi na KDS-4103 ga-enye gị akwụkwọ nlegharị anya iji windo ọgwụgwọ dị mma maka ọgwụgwọ nchegbu, ịda mbà n'obi na mgbu.
6. URB597 Ezi ntụziaka:
IV. Esi zuta URB597 si AASraw?
Esi jiri Clenbuterol mee ihe maka ọnwụ Kedu ihe nandrolone ntụ ntụ ji / nandrolone uru?
Buru ụzọ nyochaa "URB597" kagbuo zara
Naltrexone HCL ntụ ntụ
ndị ọzọ na- (19)
admin, admin on 7 Best Nootropics (Smart Drugs) n'ahịa nke -Phenylpiracet
admin, admin on Ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke 10 kachasị mma nke Loss Powder
admin, admin on Kasị irè arọ ọnwụ ntụ ntụ: Sibutramine ntụ ntụ (Meridia)
admin, admin on Ngwá ọgwụ Alzheimer J147: Ngwụrụgwụ Curcumin Na-ewepụta J147 Neurotrophic Compound